Baarlamanka federaalka oo ansixiyey in saddexda bilood ee soo socda lagu shaqeeyo $56 Milyan – Radio Daljir
Baarlamanka federaalka oo ansixiyey in saddexda bilood ee soo socda lagu shaqeeyo $56 Milyan
Janaayo 1, 2014 10:03 b 0
Muqdisho, January 1, 2014 – Baarlamanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta meel-mariyey miisaniyada dowladda ee saddexda bilood ee soo socda, kadib markii cod aqlabiyad leh ay u qaadeen 172 mudane.
Gudoomiyaha baarlamanka dalka Prof. Maxamed Sheikh Jawaari ayaa ku dhawaaqay in codkii loo qaaday miisaniyada uu noqday mid u batay dhanka ansixinta, waxaa ogolaaday 169 mudane.
Miisaaniyada maanta la ansixiyey oo dhan 56 milyan oo dollar ayaa waxaa lagu fulin doonaa howlaha qaranka saddexda bilood ee soo socda. Wasiirka maaliyada iyo qorshaynta Maxamuud Xasan Sulaymaan ayaa u mahadceliyey baarlamanka.
Dhaqaalaha la ansixiyey maanta in lagu shaqeeyo waxaa lagu saleeyey 10 wasaaradood oo ah xukuumadii hore, balse dowladda hadda la sugayo oo la filayo inay badato darteed, waxaa laga yaabaa in qorshuhu inta la ansixiyey ka fara bato
Wasaaradda maaliyada Soomaaliya oo soo gudbisay miisaaniyada KMG ah ee saddexda bilood ee soo socda, waxay sheegtay in sanadkii hore lagu guulaystay in la bixiyey dhamaan mushaaraadkii shaqaalaha rayidka ah ee dowladda oo idil.
Garoowe, Jan1-2014, Barnaamijka falanqaynta Doorashooyinka Puntland